macOS Catalina beta 4 efa eny am-pelatanan'ny mpamorona | Avy amin'ny mac aho
macOS Catalina beta 4 efa eny am-pelatanan'ny mpamorona
Mitohy ny fahavaratra ary manohy manomana, manatsara ary manavao ny kinova farany an'ny macOS Catalina i Apple. Amin'ity tranga ity dia ny beta 4 amin'ity kinova vaovao natolotra tamin'ny volana Jona lasa teo ity ao amin'ny WWDC ary antenaina hahatratra ny mpampiasa macOS tsy ho ela.
Ny andrana dia efa manandrana ity beta fahefatra ity ary miaraka hiaraka amin'ity kinova ity Apple dia namoaka ny kinova beta fahenina an'ny watchOS 5.3 ho an'ny mpamorona. Heverina fa ny kinova beta manaraka an'ny iOS 13 sy tvOS dia ho tonga ao anatin'ny ora vitsy, nefa amin'ity fotoana ity, tonga hatrany ny kinova ho an'ireo mpamorona sy mpampiasa voasoratra ao amin'ny programa momba ny lalan-drà ho an'ny daholobe.
Saingy amin'ity tranga ity dia hifantoka amin'ny kinova vaovao an'ny macOS Catalina navoaka ho an'ny mpamorona isika ary toa vitsy ny fiovana hita mihoatra ny lafin-javatra mifandraika amin'ny filaminana sy fitoniana eo amin'ny rafitra. Ao amin'ny Apple dia manana laharam-pahamehana mazava izy ireo ary hiasa ny zava-drehetra araka ny tokony ho izy dia ilaina ny fananana fitoniana ao amin'ny OS, amin'ity tranga ity amin'ny macOS.
Ireo kinova vaovao tonga ao anatin'ny andro vitsivitsy na herinandro vitsivitsy dia hitovy ary hifantoka mivantana amin'ny fanatsarana ny fitoniana sy ny filaminana. Na izany na tsy izany, ny zava-dehibe dia ny mamela ny rafitra voakilasy tanteraka na araka izay azo atao amin'ny fotoana anombohana azy ho an'ny mpampiasa rehetra ary Mac an-tapitrisany no nametraka ny rafitra. Ny marina dia milamina ny beta fa manoro anao hatrany izahay aza miala amin'ireo raha tsy mpamorona ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Catalina » macOS Catalina beta 4 efa eny am-pelatanan'ny mpamorona
Ireto dia ny emotika vaovao efa ho 60 izay ho tonga amin'ny iOS sy Mac amin'ny fararano
Ny MacBook Air SSD 2019 dia miadana kokoa noho ny maodely teo aloha